Tsy afaka miandry isika hamaha ny krizy momba ny toetrandro - Blue Ventures
Blue Ventures amin'ny COP26
Ireo mpitarika eran-tany mivory ao Glasgow amin'ity herinandro ity ho an'ny lahateny momba ny toetr'andro dia hanana adihevitra be dia be, ary mbola betsaka kokoa aza ny tokony hatao. Rehefa mihamafy ny krizy amin'ny toetr'andro, ny ranomasina eto amintsika dia tsy mbola norahonana toy izany, na tena zava-dehibe kokoa. Rivo-doza manimba. Ranomasina tondraka. haran-dranomasina maty. Mirodana ny tahirin-trondro. Ho an'ny olona an-jatony tapitrisa monina any amin'ny faritra mafana any amorontsiraka, ny fiovan'ny toetr'andro dia tsy vinavina mivaingana horesahina ao amin'ny efitrano fihaonambe Scottish, fa tena loza mitatao ho an'ny fahaveloman'izy ireo.
Ny fihaonambe, ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro faha-26 (COP26) mety ho fotoana farany tsara indrindra eran'izao tontolo izao hiatrehana ireo fanamby ireo sy hifehezana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Iray amin'ireo fivoriana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, fotoana iray tena ilaina hahazoana fanoloran-tena feno fatra-paniry laza avy amin'ireo firenena mba hampihenana ny entona.
Eo ambany vatolampy ny andrasana. Mialoha ny fihaonambe, nampanantena ireo firenena fa hanao zavatra bebe kokoa amin'ny fampihenana ny entona avoakany sy hampiato ny fiovaovan'ny toetr'andro. Saingy tsy mandeha lavitra loatra ireo drafitra ireo. Any amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiaraha-monina, tsy mahavita ny fanovana ilainay izahay mba hialana amin'ny voka-dratsin'ny krizy amin'ny toetr'andro. Ny tontolontsika dia eo amin'ny lalana mankany amin'ny hafanan'ny 3 degre eo ho eo amin'ny 2100 amin'ny ambaratonga alohan'ny indostria, avo roa heny noho ny tanjona 1.5 degre amin'ny Paris Fifanarahana.
Raha betsaka kokoa no tsy vita, dia ho loza ny fiantraika amin'ireo vondrom-piarahamonina mpanjono amorontsiraka izay iasan'ny Blue Ventures. Ny fiakaran'ny mari-pahaizana telo dia mampitombo be ny mety hisian'ny onjan'ny hafanana mahafaty, ny hain-tany ary ny firodanan'ny tontolo iainana. Ireo fiantraikany ireo dia efa tsapa any amin'ny toerana toa an'i Madagasikara, mpisava lalana amin'ny fomba fiasa eo an-toerana amin'ny fiarovana ny ranomasina, izay nanombohan'ny tantaran'ny Blue Ventures. Mamokatra 0.01% eo ho eo amin’ny entona gazy karbonika isan-taona maneran-tany i Madagasikara, nefa izao miatrika mosary nasionaly vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka izay nandray anjara kely indrindra tamin'ny krizy momba ny toetr'andro dia mahita ny tenany ho anisan'ireo tena tandindomin-doza noho izany.
Tsy maintsy mihetsika haingana izao tontolo izao mba hisorohana ny fiakaran'ny hafanana. Miaraka amin'ny fanoloran-tena amin'ny fampihenana ny entona etona lehibe kokoa avy amin'ny governemanta sy ny orinasa, ary ny ezaka feno fahasahiana amin'ny fananganana ny fahavononana eo an-toerana, ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka tropikaly dia afaka miatrika ady.
Indrindra indrindra, ny Blue Ventures (BV) dia maniry ny hahita hetsika lavitra amin'ny sehatra roa manan-danja amin'ny asantsika: Vahaolana mifototra amin'ny natiora izay mamerina sy miaro ny fonenan'ny karbaona manga ary jono salama izay miantoka ny zo eo an-toerana sy manome hery ny fitantanana eo an-toerana.
Ny mpiara-miombon'antoka sy ny vondrom-piarahamonina BV miara-miasa amin'ny karbaona manga dia mitarika eran'izao tontolo izao. Natomboka ny iray amin'ireo tetikasa fiarovana honko karbônina manga voamarina voalohany eran-tany tamin'ny taona 2019. Ary nitarika ny lalana izahay hetsika karbaona manga izay mametraka ny fiarahamonina ho lohalaharana, mampandroso ny siansa ary mamokatra fitaovana sy fomba fiasa vaovao. Nanolo-tena hizara ny zavatra hitanay izahay mba hahazoan'ny rehetra tombony: namoaka a tatitra momba ny sakana karbaona manga manga ary hampiantrano hetsika amin'ny COP26 ny 6 Novambra amin'ny 09:00 - 10:00: Coastal Blue Carbon Panel - Ny anjara asan'ny ala honko amin'ny fanalefahana sy fampifanarahana ny fiovan'ny toetr'andro.
Izahay koa no lohalaharana amin’ny fiarovana ny zon’ny mpanjono amoron-tsiraka. Io no fototry ny asantsika ary fototry ny fanatsarana ny fitantanana, ny fampitomboana ny fivelomana eo an-toerana ary ny famerenana ny fiainana an-dranomasina. Manerana firenena 14, manohana mpanjono madinika efa ho 700,000 izahay hitantana sy hiaro ny ranomasina amin'ny fomba mahasoa ny olona sy ny zavaboary.
Mifankahita any amin'ny ranomasina amoron-tsiraka ireo kofehy roa amin'ny asa ataontsika ireo, izay ilàna ny fiarovana ny toeram-ponenan'ny karbaona be toy ny ahitra amin'ny voka-dratsin'ny sambo indostrialy mpanjono. Ny trawl ambany indrindra indrindra dia afaka manimba ny toeram-ponenan'ny fanambanin'ny ranomasina izay mitahiry karbaona be dia be, ka mamerina azy any an-dranomasina. Mba hizarana bebe kokoa momba ity loza mitatao amin'ny toetr'andro ity dia namoaka a tatitra momba ny trawling ambany sy ny krizin'ny toetr'andro ary hizara ireo zava-bita lehibe amin'ny hetsika lafiny COP26 amin'ny 14:00 ny 8 Novambra. Ho hita an-tserasera ny hetsika ary afaka misoratra anarana izao ny mpanatrika: Trawling ambany sy ho avy tsy misy karbona: inona no tokony hovana?
Isika amin'ny maha planeta antsika dia manana varavarankely kely kokoa ahafahana misoroka ny fiovan'ny toetr'andro. Ireo no taonan'ny fanamboarana na fiatoana. Tsy afaka miandry isika hamaha ny krizy amin'ny toetr'andro.
Rohy fisoratana anarana ho an'ny hetsika Blue Ventures amin'ny COP26:
Sabotsy 06 Novambra 2021, 09:00 - 10:00: Coastal Blue Carbon Panel - Ny anjara asan'ny ala honko amin'ny fanalefahana sy fampifanarahana ny fiovan'ny toetr'andro
Alatsinainy 08 Novambra 2021 amin'ny 14:00 - 15:30: COP26 manokana: Trawling ambany sy ho avy tsy misy karbona: inona no tokony hovana?
Tsidiho ny Pejy fandraisana COP26 ho an'ny antsipiriany rehetra momba ny hetsika an-daniny sy ny tolo-kevitry ny politika
Fantaro ny asan'ny Blue Ventures amin'ny karbaona manga ary fiarovana ny zon’ny mpanjono
Vakio ny momba ny toeran'ny Blue Ventures momba ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana momba ny zavamananaina 30 × 30 rafitra
Fantaro bebe kokoa momba ny Manova trondro ambany fiaraha-mitantana.
Vakio ny tatitra momba ny sakana karbaona manga manga.
Blue Carbon, trawling ambany, toetr'andro, COP26, honko